Lazain’ireo Rosiana Mpanao Gazety Fa Halatra Ny Iray Amin’ireo Tantaran’ny NYT Nahazo Loka Pulitzer · Global Voices teny Malagasy
Lazain'ireo Rosiana Mpanao Gazety Fa Halatra Ny Iray Amin'ireo Tantaran'ny NYT Nahazo Loka Pulitzer
Voadika ny 23 Avrily 2017 16:37 GMT
Sary: Sari Dennise / Flickr / CC 2.0.
Tamin'ity herinandro ity, nahazo ny lokan'ny Pulitzer 2017 tamin'ny sokajy tatitra iraisam-pirenena ny New York Times noho ny lahatsoratra folo mahakasika ny “ezak'i Vladimir Putin mba haneho ny herin'i Rosia any ivelany.” Nilaza i Ivan Kolpakov, tonian-dahatsoratry ny Meduza, tranonkalam-baovao Rosiana tsy miankina, fa ny iray amin'ireo lahatsoratra ireo dia nangalarina tao amin'ny trano famoaham-baovaony.
Namoaka izany olana izany voalohany ny Meduza tamin'ny faran'ny volana Desambra, tamin'ny New York Times namoaka lahatsoratra iray an'i Andrew Kramer, mitondra ny lohateny hoe “Toy Izao No Fomba Nanakaramàn'I Rosia Mpijirika Ho An'Ny Ady An-tseraserany.”
Araka ny filazan'ny toniandahatsoratry ny Meduza, Aleksandr Gorbachev, ny tantaran'i Kramer dia miverina mitantara indray ny tatitr'ireo fanadihadiana roa navoakan'ilay masoivoho malazan'ny Meduza, Daniil Turovsky: lahatsoratra iray tamin'ny Septambra 2015 momba ireo orinasam-panjakana Rosiana izay manakarama orinasa avy any ivelany mba hanomboka hizara fanafihana DDoS (distributed denial of service), ary tantara iray tamin'ny Novambra 2016 momba ny fomba nataon'ny fanjakana Rosiana nanakaramàna mpijirika.
“Mandraisa lahatsoratra iray nosoratan'i Turovsky ao amin'ny Meduza; avy eo mandraisa lahatsoratra iray faharoa nosoratan'i Turovsky ao amin'ny Meduza, afangaroy, afangaroy, ary PAF, mahazo lahatsoratra ao amin'ny New York Times ianao,” hoy Gorbachev nanoratra tao amin'ny Facebook tamin'ny 30 Desambra, nanampy, “araka ny filazan'i Donald Trump amin'ireny tranga ireny, TSY FAHAMARINANA!”
Io andro io ihany, nanely ity fitarainana ity i Turovsky, nanoratra hoe “Ary noho izany, nivoaka voalohany teo amin'ny pejy voalohan'ny New York Times aho anio. Raha ny marina, ny mpanoratra tao amin'ny gazety dia niverina nilaza tantara roa izay nivoaka tao amin'ny Meduza iray volana sy tapany lasa izay ny iray ary herintaona sy tapany lasa izay ny iray.”
Tao anatin'ny ora vitsy, namaly tanaty fanehoankevitra iray i Andrew Kramer:
Daniil, niresaka taminao aho nandritra ny fanomanana ity lahatsoratra ity ary nanazava aho fa nikasa ny hanaraka ny dian'ireo asa voakalinao, hanome fisaorana ny Meduza , toy ny efa nataoko, ary nisaotra anao tamin'ny fanampianao. Tsy miombon-kevitra aminao aho amin'ny filazanao fa ny lahatsoratra “iray manontolo” dia mampahatsiahy lahatsoratra roa an'ny Meduza. Misy tatitra, tsy tao amin'ny lahatsoratry ny Meduza, ao amin'ny tantaranay, indrindra fa ny mahakasika ny fandraisana mpiasa any am-ponja. Ny manokana sy zava-dehibe indrindra, milaza mazava ny lahatsoratray fa ny Meduza no “voalohany namboraka ny ezaka fandraizana mpiasa” ary nahitàna rohy.
Telopolo minitra taty aoriana, nandray anjara i Kolpakov, nanontany an'i Kramer ny antony mahatonga ny lahatsorany mifandray amin'ny rohin'ny lahatsoratry ny Meduza tamin'ny Novambra 2016, tsy niraharaha ilay lahatsoratr'i Torovsky tamin'ny Septambra 2015. Tsy mbola niverina naneho hevitra i Krammer.
Toa nifarana teo ilay tantara, hatramin'ny alatsinainy, tamin'ny lahatsoratr'i Kramer tafiditra ho isain'ny tatitry ny New York Times nahazo ny loka Pulitzer.
Ny andro manaraka, nanambara i Kolpakov fa hanakarama manam-pahaizana manokana avy any ivelany mba hanadihady ny asan'i Turovsky sy ny tantaran'i Kramer, mba hamaritana raha nisy zavatra nadika na nodisoina. Raha voamarina ny ahiahin'ny Meduza, nilaza i Kolpakov fa efa niomana ny hitondra ny raharaha any amin'ny Filankevitry ny Pulitzer Prize izy.
“Tsy tiako hoe hisy olona tsy hahazo ny lokany, nefa ho afa-po kokoa aho raha esorina ao amin'ny lisitry ny asa nahazo loka ity lahatsoratra [an'i Kramer] ity”, hoy Kolpakov nanazava tao amin'ny Facebook.
Ankoatra ny fitarainana ankapobeny noho ny tsy nahafahan'ny New York Times nanme ny haja tokony ho an'ny Meduza noho ny fandikàna ireo tantara nosoratana ao amin'ny “Ny Fomba Nanakaramàn'i Rosia Mpijirika Mahay ho Amin'ny Adiny An-tserasera”, nilaza i Kolpakov fa toa nadikan'i Kramer amin'ny teny Anglisy ny asan'i Aleksandr Vyarya natao ho an'i Turovsky tao amin'ny tatitra nataony.
“Henon-tsika avy amin'ny loharanom-baovao [Aleksandr Vyarya] fa tsy tena te-hiresaka tamin'ny NYT izy”, hoy ny fanambaran'i Kolpakov. “Ary tena azo inoana, fa tsy nahavita nahazo ireo fitanisàna nilainy i Kramer. Ankoatra izany, sarotra ny hahazo sary an-tsaina olona iray miresaka amin'ny mpanao gazety amin'ny fehezanteny mitovy.”
Nozarain'i Kolpakov ity imailaka manaraka voarainy avy any amin'i Michael Slackman ity, tniandahatsoratra iraisam-pirenenan'ny New York Times:
Niresaka tamin'i Neil McFarquhar, lehiben'ny biraonay aho, izay inoako fa nirehanao koa. Nilaza tamiko i Neil fa ny mpanao gazetinareo, Atoa Turovsky, dia tena nalala-tànana tokoa tamin'ny fanampiana an'i Andrew ho any amin'ny làlana marina. Manamarika ny tantara fa ny Meduza aloha no voalohany namoaka momba ilay ezaka fandraisana mpiasa ary manome rohy mankàny amin'ilay lahatsoratra.
Na izany aza, ilay tantara sy ireo fitanisàna, dia samy vokatry ny tatitra tany am-boalohany, nofenoina mivantana, t​​amin'ny alalan'ny antso an-telefaona na tamin'ny alalan'ny imailaka. Tsy misy zavatra nobataina fotsiny avy ao amin'ny Meduza, na dia fantatro aza ny antony nitateranao ilay olana.
Andrew dia solontena natokisana efa hatramin'ny ela, izay nampiseho mandrakariva ny fanolorantenany amin'ny fitondrantena avo lenta ary mino aho fa manana izany koa izy eto.
Milaza i Kolpakov fa nilaza taminy koa i Neil MacFarquhar, lehiben'ny biraon'ny The New York Times ‘ any Maosko, fa tsy maintsy niady i Kramer hitazonana ny fanondrona kely mankamin'i Meduza izay nataony tao anatin'ny drafitra faran'ny tantarany. “Raha ny marina,” MacFarquhar no nampahafantatra azy, “ao anatin'ny famoahana voalohany nataon'ny New York, ny fehezantsoratra niresahany hoe ny Meduza dia voahilika tamin'ny habaka, ary nisisihan'i Andrea ny mba hamerenana an'io amin'ny laoniny.“
Tao amin'ny fanehoankevitra momba ny lahatsoratr'i Kopalkov tao amin'ny Facebook, i Ivan Nechepurenko, solontenan'ny New York Times any Moskoa nanoro hevitra ny Meduza hiantso an'i Liz Spayd, ilay tonian-dahatsoratra izay miandraikitra ny olan'ny fahamatoran'ny asa fanaovana gazety sy ny fitsarana ny vaovao .
Tamin'ity indray mitoraka ity, niala tamin'ny Facebook i Kramer, fa nandefa ity hafatra manaraka ity tamin'ilay Rosiana mpamakafaka, Oleg Kashin:
Raha ny marina, nifandray mivantana tamin'i Vyarya aho. Nohamariniko sy nifanakalozako hevitra ireo singa tamin'ny tantarany. Ary nanome ahy teny notsongaina izy, izay mitovy sy somary samy hafa kely amin'izay nolazainy tamin'ny Meduza.
Nilaza i Kolpakov fa ilay manam-pahaizana manokana avy any ivelany dia hiresaka amin'i Vyarya mba hanamarina ny fitarainan'i Kramer, nefa mbola tsy resy lahatra ny trano famoaham-baovaon'ny Meduza. Tao amin'ny fanehoankevitra tety amin'ny aterineto, nilaza i Daniil Turovsky fa efa nanontany an'i Vyarya momba ny fifandraisany amin'i Kramer. “Tena marina ve? Nalefako any aminy tamim-panajàna ny fehezan'entana hatreto,” hoy ny toa nambarani Vyarya taminy.
3 ora izayAzia Afovoany sy Kaokazy